Amaphupho ngamakhaya | AMAPHUPHO
Uma uphupha ukuthi usekahya lakho, kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha, kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina, kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile, uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe, uzohlupheka ngokwezimali, ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi, kusho ukuthi uzothuthuka empilweni, futhi uzothola umsebenzi olungile.
3 Responses to Amaphupho ngamakhaya
Siyabonga October 21, 2015 at 4:36 am #
Nosipho March 6, 2016 at 4:09 pm #
yolanda June 21, 2017 at 7:56 am #